महान खेलाडी बन्न मेसीले विश्वकप नै जित्नुपर्ने हे ? - सबै खेल
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १५:४३ June 4, 2020 ग्यारी लिनेकर	0 Comments
लियोनल मेसीले पस्कने खेलमा त्यो स्वाद छ, जुन अरू कसैमा छैन । उनी फुटबललाई कलामा परिवर्तन गर्ने गर्छन् । जति–जति बेला उनको खेल हेर्छु, म आफैंले आफूलाई प्रश्न गर्ने गर्छु, ‘कसरी पो सक्छन्, मेसी यसरी खेल्न ?’ मेसीको दिन नलाग्दा पनि खेल कम्ताको हुन्न । पूरा खेल अवधिमा मेसीले तीन वा चारपल्ट यस्तो कला प्रदर्शन गर्ने गर्छन्, जुन मैले आफ्नो पूरा खेलजीवनमा कहिले पनि गर्न सकिनँ ।
अगाडि खेल्न राम्रा खेलाडी भनेपछि त्यतिबेला डरलाग्दो फल खेलिन्थ्यो । तर मेसीले यति धेरै खेल खेल्नु सक्नुमा उनलाई अझ विशेष बनाउने गर्छ । चोटबाट बचेर मेसी मात्र होइन, रोनाल्डोले पनि जति खेले, त्यो ठूलै हो । किशोर छँदादेखि मेसीले लगातार खेलिरहेका छन् र अब उनी ३३ वर्षका पनि हुनेछन् ।
सायद रोनाल्डो पनि उत्तिकै राम्रा समकलीन खेलाडी भएर पनि उनलाई धेरै फाइदा भएको छ । उनीहरूमध्ये एकले अर्कोलाई राम्रो खेल्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ वा दबाब सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । मेसीलाई लिएर राम्रो पक्ष के पनि हो भने उनी कहिल्यै ठूलो विवादमा फसेनन् । जस्तो, म्याराडोना खेलजीवनको उत्सर्गमा फसे । उनको व्यक्तित्व नै फरक छ र यसको कारण अन्तर्मुखी स्वभाव पनि हो । यही कारणले उनी फुटबलका अन्य महान् खेलाडीभन्दा फरक छन् । तर यो तथ्यले उनलाई फुटबलमा आफ्ना भावना पोख्न मद्दत गरेको हुनुपर्छ ।
← ब्राभो, हेटमेयर र पाउलले इंग्लयानड भ्रमण नगर्ने
मेसीले मालोर्कासँगको खेल गुमाउने →
रोनाल्डो पथमा रियलका ‘नयाँ नेयमार’ !
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १४:४५ महेश कार्की 0
९ असार २०७५, शनिबार २०:३१ महेश कार्की 0
ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, व्यक्तिगतभन्दा टिमको उपलब्धी महत्वपूर्ण
१८ श्रावण २०७६, शनिबार १७:१३ महेश कार्की 0